ဦးကိုနီ သူရဲကောင်းလား - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — February 6, 2017
ဦးကိုနီဟာ ပြန်ကြားရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေမြင့် ခေါင်းဆောင်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားကို လေ့လာခရီးထွက် တဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါသွားပါတယ်။ ဘာသာအယူ မတူ ကွဲပြားသူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု လေ့လာရေးခရီးဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်သား ၀န်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ခရီးစဉ်က အပြန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်အရောက် အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း အဲဒီသတင်းကို အထူးအသားပေး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“NLD ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီ သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရ” ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖော်ပြပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီသည် ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် ညနေ ၅နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် Terminal 1 ရှေ့တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်း ကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းလို့ ဖော်ပြကြပါတယ်။
ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့အခါ Facebookမှာ ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးပေးကြ၊ ရေးသားကြတာကို ဖတ်ရှု ရပါတယ်။ အချို့ကတော့ သနားဂရုဏာသက်ကြောင်း၊ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းရကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာ မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူကြောင်း၊ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို သေဆုံးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဂုဏ်ပြုချီးကျူးကြပါတယ်။ အချို့မနှစ်သက်တဲ့ လူတွေကတော့ ချီးကျူးစရာမလိုကြောင်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးကိုနီဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်လို့ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုသာ ကြည့် သူဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ရေးသားကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမဝေဖန်လိုပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကြံခံရလို့ ၂၅ နာရီအကြာမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ကလည်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုဟာ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်လုပ် ဆောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ကနဦးစစ်ဆေးချက်များအရ သုံးသပ်တွေ့ရှိရကြောင်းလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့်မဖြစ်ဘဲ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြဖို့ ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး သွေးထိုးမှုတွေကို အထူးသတိပြုကြဖို့လည်း သတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ကလည်း ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှန် ပေါ်ပေါက်ရေးဖြစ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကို အမြန်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်း ကြေညာချက်တွေ အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ စသည့် စသည့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးဇော်သိန်းကလည်း ”ဒီကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။” လို့ ပြောတဲ့ အကြောင်း သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
အာဏာရ NLD ပါတီက ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရခြင်းကို ၀မ်းနည်းကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက် အစားထိုးမရသော ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာလည်း ဦးကိုနီအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်တဲ့ ဒီချုပ် အမတ်တွေက ဖဲကြိုးအနက်တပ်ဆင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်ရတယ်ဆို ကတည်းက ဒီပြသနာရဲ့ အတိမ်အနက်နဲ့ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဦးကိုနီရဲ့သမီးကြီး ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင်က “လူကတော့ ပြန်လာစေချင်လို့မှ မရတော့တာ။ ကျွန်မတို့မှာ နောက်ထပ်ဖြစ်စေချင်တာ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလေ။ အမှုမှန်ပေါ်စေချင်တာပေါ့။ ဒါပါပဲ။ ရေဆုံးမြေဆုံးအထိ လိုက်ပြီး အမှုမှန်ပေါ်စေချင်တယ်။ ဒါပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီထက်တခြားဘာမှ တောင်းဆိုစရာမရှိပါဘူး” လို့ ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဆရာဦးကိုနီတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ရှိပါပြီ။ သူ့အကြောင်းကို အစအဆုံး သိသူတစ်ယောက်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူဘာတွေလုပ်တယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ် ဆိုတာတွေကို လည်း ဂဃနဏသိရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဦးကိုနီဟာ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လိုပြင်ကြမှာလဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာ ကျွန်တော်အမှာစာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမှာစာမှာ သူနဲ့ကျွန်တော် ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ “အခြေခံဥပဒေကို ပြင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောတာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး၊ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောတာပါ”
“အခြေခံဥပဒေကို ပြင်တဲ့အခါ တရားဥပဒေရှုထောင့် Legal point of view တစ်ခုတည်းကသာ ပြင်ဖို့ ကျွန်တော်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Political point of view နိုင်ငံရေးရှုထောင့်၊ Logical point of view ယုတ္တိဗေဒ ရှုထောင့်စတဲ့ . . . စတဲ့ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ သုံးသပ်ပြီး ပြင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပြီး ဒီဆောင်းပါးတွေကို ကျွန်တော်ရေးနေတာပါ …” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူသဘောထားကို ကျွန်တော်ကမေးတော့ “ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ရာမှာ တပ်မတော်ဟာ အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့…။ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၁၂၂)မှာ ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသော တပ်မတော်သားများသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားပဲ။ သူတို့လည်း နိုင်ငံ့သားကောင်းတွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာက တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ခဏခဏမပြောင်းလဲဘဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သက်တမ်းအတိုင်း စခန့်ကတည်းက လွှတ်တော်သက်တမ်းကုန်တဲ့အထိ ရှိစေချင် တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်များနည်းတူ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့ လွတ်လပ်သောဆန္ဒအရ မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရှိစေချင်တာပါပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်မှာပဲ စာရေးသူရဲ့အမှာအနေနဲ့ ”နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော် အား မည်သို့မည်ပုံ တည်ထောင် အုပ်ချုပ်မည်ဆိုသည်ကို နိုင်ငံသားများအကြား သဘောတူချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ် ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အာဏာ၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်မှာ နိုင်ငံသားပြည်သူများသာဖြစ်ရာ နိုင်ငံသားတို့၏ ဆန္ဒသာအဓိကဖြစ်သင့်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲသူ လူတစ်စု၏ဆန္ဒကိုသာ အလေးထားရမည်ဆို လျှင် နိုင်ငံသားတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာနောက်တန်းသို့ ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အခါမျှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာ မည် မဟုတ်ပါဟု ကျွန်တော်အလေးအနက် ပြောလိုပါသည်”လို့ သူ့သဘောထားကို တင်ပြသွားပါတယ်။
ဦးကိုနီနှင့် မဲမသမာမှုများ ဟန့်တားချက်
ရွေးကောက်ပွဲ မဲမသမာမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ မဲမသမာမှုများနှင့် ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာ “၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သုံးသပ်ရပါက ကန့်ကွက်မှုများ၊ အတိုင်အတော ပြဿနာများ အမြောက်အများ ရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
အံ့သြဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံးပြဿနာမှာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ညနေ (၄)နာရီ မဲရုံးများပိတ်ပြီးနောက် မဲရေတွက် ရာတွင် ညဉ့်နက်သည်ထိ ကြိုတင်မဲထုတ်များ တစ်ထုပ်ပြီးတစ်ထုပ် ရောက်လာကာ ညသန်းကောင်ကျော်သည်ထိ မဲများရေတွက်နေရသည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် အနိုင်မရမချင်း ကြိုတင်မဲများ ဆက်ကာ၊ ဆက်ကာ ရောက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ကြိုတင်မဲဆိုသည်မှာ မဲရုံစဖွင့်သည့် နံနက် (၆)နာရီ ကတည်းကပင် မဲရုံသို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ နောက်ထပ် ကြိုတင်မဲဟူ၍ မည်သည့်အရပ်ကမျှ လာရန် အကြောင်းမရှိပါ။ လာခဲ့လျှင်လည်း ဥပဒေအရ လက်မခံရပါ” လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
စာပေနဲ့ အသိဥာဏ်ပေးရုံမကပါဘူး။ လူကိုယ်တိုင်လည်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည်သွားရောက် ဟောပြောပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက NLD အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သေးပါ။ ကိုယ့်ကား ကိုယ်မောင်း။ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စား။ ကိုယ့်ကုန်ကျစရိတ် ကိုယ်ဘာသာကျခံပြီး လှည့်လည်ဟောပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်လိုသူတချို့က သူ့ကို မုန်းတီးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်လမြိုင်သို့ ဟောပြောပွဲသွားတုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ နံနက်တစ်ပွဲ၊ ညနေတစ်ပွဲ ဆက်တိုက်ဟောတာ ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့ပါပဲ။ ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တော့ ည ၁နာရီ ထိုးပါပြီ။ ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာ သူပြောနေကြစကားလေး တစ်ခွန်းရှိပါတယ်။
“ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်တွင် ‘အစိုးရ’ ဆိုသည်မှာ လူထု၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။ အရှင်သခင် မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူလူထုသာလျှင် အရှင်သခင်၊ နိုင်ငံတော်အာဏာ၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြပါသည်” လို့ အမြဲတမ်းထောက်ပြပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သိထားရမည့် အချက်များ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့် ပုံများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့တွင်လည်း သတိထားရမည့် အချက်များ ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကို လည်း ဟောပြောပို့ချပါတယ်။
၂၀၁၂ ခု ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ပြီး “ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မဲမသမာမှု” ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးများရေးတယ်။ ဥပဒေသဘောတရား တွေကို အရှိကို အရှိအတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်တင်ပြတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးတွေကို စုစည်းပြီး “လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဘယ်လိုပေးရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ထုတ်ဝေပြီး ပြည်သူကြားသို့ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့သွားအောင် ကြိုးစားတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆရာရဲ့ စေတနာအရာထင်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသိပြီးဖြစ်တာမို့ အကျယ်မဖော်ပြ တော့ပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု နည်းပါးနေတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသမျှ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာမှု ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး “ဂဠုန်ဆရာစံ ရာဇ၀တ်တရားခံလား နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်းပါးများ” စာအုပ်ကို ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလက ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၊ စာရေးဆရာ မောင်ဝံသနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမှာစာ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမှာစာတွေကို ဖတ်လိုက်ရင် ဦးကိုနီ ဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာ သိသာ ပေါ်လွင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဦးကိုနီကို ဥပဒေ ပညာမှာ သူသာ အတော်ဆုံးလို့ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူလို တော်တဲ့သူ၊ သူထက် တော်တဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပညာတော်သလို တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာကောင်းထားဖို့လဲ လိုပါ တယ်။ ဦးကိုနီကို မလိုလားသူတွေက ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူတဲ့အတွက် ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ သူရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ၊ လူမျိုးဘာသာ အခြေပြု သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ မဖြစ်စေလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံး တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာစေလိုတဲ့ သဘောထားတွေကိုတော့ မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဦးကိုနီကွယ်လွန်တဲ့နေ့က သူရဲ့ သမီးကြီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာယဉ်နွယ်ခိုင်ကို ဂျာနယ်တစ်စောင်က “ဦးကိုနီကို သူရဲကောင်းလို့ထင်ပါသလား”လို့ မေးတယ်။ သမီးဖြစ်သူက “ကျွန်မအတွက်ကို မေးတာလား၊ ကျွန်မအတွက် ဆိုရင်တော့ ဖေဖေက သူရဲကောင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခြားလူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ ကျွန်မ မသိပါဘူး။ သူရဲကောင်း ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အများက သတ်မှတ်ကြမှာလေ” လို့ ဖြေလိုက်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
ရှိတ်စပီးယားရေးတဲ့ ဂျူးလီးယပ်ဆီဆာပြဇာတ် ကို ဖတ်ဖူးကြမှာပါ ဂျူးလီးယပ်ဆီဆာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပြီး တဲ့နောက် လုပ်ကြံသူခေါင်းဆောင်ဗရူးတပ်က မိန့်ခွန်းပြောတယ်။ သူပြောပြီးတဲ့အခါ ဆီဆာရဲ့ မိတ်ဆွေ မတ်အန် တော်နီက မိန့်ခွန်းပြောတယ်။ သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ”ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာဟာဖြင့် ဆီဆာကို မြှုပ်နှံသဂြိင်္ုဟ် ဖို့အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့ကို ချီးကျူးထောပနာပြုဖို့ ရောက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေဟာ မကောင်း တာလေးတွေ လုပ်မိတယ်ဆိုရင်…၊ သူတို့သေပြီးတဲ့အထိ ပြောစမှတ်ပြု ကျန်ရစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ … ကောင်းတာလေးတွေဆိုရင်တော့ … သူတို့ရဲ့ အရိုးစုနဲ့အတူ မြှုပ်နှံပစ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ ဒါက လူတွေရဲ့ သဘာဝ ဆိုတော့ ဆီဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း . . . ရှိပါစေတော့ . . . “ တဲ့။
အခုလည်း ဦးကိုနီကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် သူ့ရဲ့ သစ္စာဖောက်တဲ့အချက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားပြောဆိုတဲ့အချက်၊ အမျိုးဘာသာ အခြေပြု သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု တွေပြုတဲ့အချက်၊ တစ်ခုတလေရှိရင် လူတွေသိသွားအောင် အထောက်အထားအကိုးအကားနဲ့ ဖော်ပြစေချင်ပါတယ်။ သက်သက်မဲ့ အပုတ်ချတဲ့သဘောမျိုးတော့ မပြောကြစေချင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မေ့ပစ်ချင်မေ့ပါ။ မေ့ပစ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထောက်အထားမရှိ တမင်သက်သက် စွပ်စွဲပြောဆိုတာတွေကို တော့ ရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်။ ဦးကိုနီကတော့ သူ့အသက်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ သူလိုမဖြစ်အောင် သတိပေးခဲ့ပါပြီ။ တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေ သူလို အသက် စွန့်မသွားကြပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိလို့ပါဘဲ။ ပြီးတော့ ဦးကိုနီရဲ့ ပညာနဲ့စေတနာကို ယှဉ်တွဲပြီး မြင်စေချင်ပါတယ်။ ဦးကိုနီရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စာအုပ်မှာ ကျွန်တော်အမှာစာ ရေးပေးတုန်းက-
မေခနှင့် မလိခသည် ပေါင်းဆုံ၏။ ထိုအခါ “မြစ်မဧရာ”ပေါ်ထွန်းခဲ့၏။
“မြစ်မဧရာ”သည် မြန်မာပြည်၏ “အသက်” ….။
ဆရာ၏ စေတနာနှင့် ဆရာ၏ ပညာတို့သည် ပေါင်းဆုံ၏။ ထိုအခါ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆောင်းပါးများ” စာအုပ် ပေါ်ထွန်းခဲ့၏..။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ “အသက်” . . .။
သူအားလုံး “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”ကို နှလုံးသည်းပွတ်တွင် သိမ်းဆည်းပြီး၊ ဦးနှောက်တွင် သိုမှီးထား နိုင်ကြပါစေ … လို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
အခုလည်း နောက်ထပ်နောက်ထပ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေ ထပ်မံမပေါ် ပေါက်ကြပါစေနဲ့လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းနေမိပါတော့တယ် . . . ။
ကဲ… မိတ်ဆွေ သင်ကကော ဦးကိုနီကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ ဦးကိုနီအပေါ် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ဘာပြောတယ်ဆိုတာထက် ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့။
Vol2, No.6, (6-2-2017) မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Tags: DrTheinLwin, UKoNi